Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Columbian Yerry Mina Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Yerry Mina agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya (Geraldine Molina), Nwatakiri, ibi ndu, ndu nke mmadu na uru ya.
Na nkenke, anyị na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ndị na-agba ọsọ na Colombia. Akụkọ anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ nwetara ihe ịga nke ọma na egwuregwu ahụ.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Yerry Mina's Bio, lee ndụ nwata ya iji bilie gallery nke na-achikọta akụkọ ihe mere eme ya.
Ihe omuma nke Yerry Mina - Lelee mbu nwata ya na ihe omuma ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ ruru ụwa niile na 2018 World Cup, na-atụle ihe mgbaru ọsọ atọ maka Colombia - isi niile.
N'agbanyeghị otuto a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ Yerry Mina nke zuru ezu. Anyị akwadebela ya, maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Yerry Mina Storymụaka Akụkọ:
Yerry Mina agbanwebeghị kemgbe ọ bụ nwata. I kwenyere m?
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha aha - Gold M. A mụrụ Yerry Fernando Mina González na ụbọchị 23 nke Septemba 1994 na nne ya, Marianela González, na nna, José Eulises Mina n'obodo Guachené, South West Columbia.
Mgbe a mụrụ ya, nne na nna ya kwetara n'ụzọ pụrụ iche nke aha nwa ha nwoke na nwa nwoke. You Isi mmalite aha Yerry Mina sitere na usoro eserese a ma ama 'Tom na Jerry'.
N'ezie, Marianela (nne ya) họrọ aha 'Yerry' n'ihi ịhụnanya o nwere maka Jerry - na usoro eserese ahụ. Ọ kpọrọ ya Yerry site na iwepụta 'J' site na njirimara katọn kachasị amasị ya - Jerry (Moké).
Zute ndị nne na nna Yerry Mina - José Eulises Mina na Marianela González.
Papa ya na mama ya nwere ya mgbe ha dị obere. Site na ịmalite ezinụlọ ha n'oge, Jose na Marianela ga - enweta ume niile dị ka nne na nna ochie - na ịchụ ụmụ ụmụ ha gburugburu.
Yerry Mina bụ nwa nwoke na nwa mbụ n'ime ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti José Eulises Mina na Marianela González.
Ya na nwanne ya nwoke, bụ Cristian Andrés, na nwanne ya nwoke nke obere, Juan José, nọrọ afọ nwata ya.
Mina, dị ka onye mbụ a mụrụ n'ezinụlọ, bụ nwa a na-eme ememe. Ndi otu nchoputa anyi tinyere foto a dika oge kachasi nma n’oge ya dika nwatakiri.
Little Yerry na-eme ncheta ọmụmụ ya nke mbụ.
Kemgbe ọ bụ nwata, ndị ezinụlọ ya, yana ndị agbata obi ya, na-ele Yerry anya dị ka nwata dị umeala n'obi nke nwere ikike ịkwanyere ndị mmadụ ùgwù.
Ọ bụ ụdị nke anaghị eme mkpesa banyere ihe Marianela na José (nne na nna ya) enweghị ike imeli ya.
Dị ka ọkpara, Yerry mụtara ibu ọrụ nke isetịpụ ihe nlereanya n'ụlọ. Malite na, ọ na-elekọta Juan José na Cristian Andrés, ụmụnne ya nwoke.
Nakwa dị ka nwatakịrị, kpakpando n'ọdịnihu abụwo nnukwu Mmasị Dog. Hụnanya o nwere maka anụ ụlọ sochiri ya ruo ogo. Nke a bụ ndị na-agba ama ya na Nkịta ya aha ya bụ Madonna.
Ọbụna mgbe ọ lụrụ Geraldine Molina, Yerry ka bụ onye na-ahụ n'anya.
Ezigbo ezinụlọ Yerry Mina:
Columbian sitere na ezinụlọ egwuregwu, onye nwere ụdị ndụ ibi ndụ dabere na ịhụnanya maka nchekwa.
Nna Yerry Mina, José Eulises Mina, bụ onye na-eche nche tupu ezumike nká. N'ihi ya, nwatakịrị ahụ chọrọ ịdị ka ya.
N'ezie, ọbụna nwanne nna Mina bụ ọkachamara na-eche nche. Ka a sịkwa ihe mere nwa anyị nwoke ji chọta ọrụ ya n'oge.
Isi ihe iji mata, Onye agbachitere ahụ sitere na ezinụlọ dara ogbenye. Ọrụ nlekota José Eulises Mina nyere ndị ezinụlọ ya obere ego.
You maara?… Yerry Mina kwụgidere n'azụ ụgbọ mmiri iji buga ụlọ akwụkwọ dịka nwatakịrị. Ọ rụkwara £ 1.50 kwa ụbọchị na-ere mkpụrụ, mmepe nke mere ka o kwe nkwa ịrụsi ọrụ ike ma mee ya na ndụ.
Ezigbo Mina Ezinne Mina:
Nke mbu, ndi Columbian esiteghi na otu obodo buru ibu nke obodo ya - Bogotá, Medellín, Cali, wdg. Eziokwu bu na, nkpuru ezinulo Mina kwuru otutu ihe banyere mmalite di ala ya.
Isi nke Yerry Mina bụ Guachené, nke dị na Southwest nke Columbia.
Maka ebumnuche doro anya, Guachené bụ obere obodo ahịa nke ihe dị ka mmadụ 20,000 - ọtụtụ n'ime ha na-asọpụrụ Yerry dị ka dike ha.
Nke a bụ ebe ọ tolitere, unyi dara ogbenye. Ọzọkwa, 99% nke ndị nọ n'obodo a bụ ụmụ Afro, gụnyere ndị ọgba bọọlụ.
Yerry Mina Agụmakwụkwọ na Ọrụ Buildup:
Kemgbe nwata, ndị mmadụ na-ahụ Gold Mine dị ka onye dị uchu, dị ka a hụrụ n'ụlọ akwụkwọ ọ gara. N'ịbụ onye sitere na ezinụlọ dara ogbenye, Mina kwụrụ ọtụtụ ego ụlọ akwụkwọ ya site na ego nke mkpụrụ osisi hawking.
Ndị nne na nna Yerry Mina anabataghị echiche nke ilekwasị anya na football n'oge ọ dị afọ iri na ụma.
Dị ka ịkpachara anya na ọ bụrụ na football ada ada, Marianela na José gbara Yerry ume ka ọ gụọ akwụkwọ BAC (agụmakwụkwọ nke abụọ).
Mmụta Yerry Mina: O nwere ọgụgụ isi na ebumnuche ya ụbọchị agụmakwụkwọ.
Dị ka a tụrụ anya ya, nwatakịrị dị umeala n'obi mere ka papa ya na mama ya dị mpako tupu ya etinye uche ya niile na egwuregwu.
Yerry nwetara agụmakwụkwọ kacha mma n'obodo ya bụ Guachené. N'ikpeazụ, mgbe oge ruru, ọ nakweere ọkpụkpọ ya (bọọlụ) - dịka mbubreyo mbubreyo.
Yerry Mina Biography - Akụkọ nke Football:
Malite na ọrụ ntorobịa ya, mkpụrụ ndụ ihe nketa Yerry malitere ịrụ ọrụ dị ka ịdị elu, ogo, na ọdịdị ahụ ya.
N'ihi ọdịdị ogologo ya, nwa anyị nwoke chọrọ ịbụ onye na-eche nche. Na nzaghachi, nna ya na nwanne nna ya ekweghị. N'ikwu okwu banyere ebumnuche ahụ, Mina kwuru otu oge;
NNA M GWADIRI M KA MGBE IHE MGBE EGO. DC KA Ọ B ,R,, ỌD THEKA GOOLKEEPER NA-Achọrọ Ọtụtụ Schụ. Ọ NA UNLE B WASGH RE ADB TOR TO TOB THATR THAT AH THAT NA M. NNA M KWURU NA Achọghị SEhụ M Ahụhụ Dịka Ọ Na-eme.
N'ịgbaso nzọụkwụ nna ya na nwanne nna ya, nwata ahụ malitere ndụ dị ka onye na-agbachitere ya. Yerry enweghị ahụmahụ nke ọrụ nwata, nke ọtụtụ ndị na-agba ụkwụ ụkwụ nwere n'etiti afọ 5 ruo 10.
Ndụ mbido na egwuregwu bọọlụ:
N'oge a, ọ gbalịsiri ike n'ọchịchọ iji nweta onwe ya ịga ọzụzụ. N'ịchọ ibelata ibu arọ nke ndị mụrụ ya, Mina mepụtara omume nke ịwụkwasị n'ụgbọala ndị kwụsịrị na ọkụ uhie.
N'ihi ịrụsi ọrụ ike na nkwụsi ike, ọ ghọrọ onye gụsịrị akwụkwọ na Deportivo Pasto na 18. N'oge na-adịghị anya, Nature malitere iji ngọzi dị ukwuu gọzie etiti ụlọ elu ahụ, nke mere ka ọ dị ka ibu.
Na 18, Mina abụrụla Onye Nnọọ. Ọdịiche dị elu dị n'etiti Mina na onye otu ya abụghị ụwa a.
Yerry ji obi ike na-egwuri egwu, na-egosipụta ọmarịcha egwuregwu bọọlụ karịa onye ọ bụla ọzọ na otu ya. N'ihi obi ike ya, otu ìgwè kachasị elu nke Columbian - Independiente Santa Fe - nwetara ọrụ ya na 2013.
Mina ghọrọ klọb ọhụrụ ya ozugbo. Ghọ onye mbido mgbe niile maka ndị Kadịnal ahụ, o nyeere ha aka inweta nnukwu iko abụọ - Copa Sudamericana na Superliga Colombiana - niile na 2015.
Yerry Mina Bio - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
1stbọchị 2016st nke Mee XNUMX hụrụ nnukwu mbuli elu na ndụ ya. Mina kwadoro dị ka onye ọkpụkpọ ọhụụ nke Palmeiras, ụlọ ọrụ Sao Paulo nke Brazil nke nwere akụkọ mgbe ochie Gabriel Jesus, Rivaldo, na Roberto Carlos.
Na nke mbụ ya, ọ hapụrụ ndị ezinụlọ ya biri n’obodo ọzọ, Brazil. N'ihi ebube ya na Palmeiras, a kpọrọ onye na-agbachitere 6 ụkwụ 5 sentimita asatọ na otu ndị otu mba Columbian. Agbanyeghị na mmerụ mmachi, arụmọrụ Mina adabaghị.
Aghọọ onye na-enweghị mgbagha mbido mgbe ọ gbakere site na mmerụ ahụ, dike ahụ na-agbachitere malitere ịme ihe ngosi nke arụmọrụ dị egwu.
N'ihi nke a, Mina ghọrọ ihe enyemaka iji nyere ndị otu ya aka inweta asọmpi Campeonato Brasileiro Série A.
Hụ ka onye na-agbachitere ya si bụrụ ụjọ. Ka a sịkwa ihe mere o ji nwee ihe ịga nke ọma.
Akụkọ 2018 World Cup:
N'ihi usoro dị egwu, Yerry hụrụ mba ya depụtara ya dị ka onye bụ isi nke ndị otu ha.
Na Mee 2018, ọ joyụ nke ezinụlọ ya amaghi oke ka akpọpụtara ya n'etiti ndị otu 23-Colombia maka Russia 2018 World Cup.
Nnukwu ụlọ na-azụ ụlọ na-arụ ọrụ kachasị na mgbasa ozi ụwa. Na asọmpi a na-echefu echefu, Yerry nwetara ndekọ maka ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ (atọ) na otu World Cup site n'aka onye na-agbachitere ya.
N'ezie, anya Mina maka ebumnuche na akụrụngwa na-ewetara ya otuto site na nsọpụrụ na ọkwa kasịnụ n'ụwa.
Dị ka a hụrụ na vidiyo dị n'okpuru, nwa anyị meriri ugboro atọ, gụnyere isi okwu oge ikpeazụ nke na-egbuke egbuke nke were Gareth SouthgateEngland dị ka oge mgbakwunye.
Gbaso ya obodo ntaramahụhụ shootout ụzọ ọpụpụ n'aka nke Jordan Pickford, FC Barca ghọtara na o nwere ike itinye ego na nnukwu onye ahịa ya bara uru.
Onye buru ibu nke Spanish kpatara mbufe ya wee tinye aha ya m 100m na ​​aha ya.
Yerry Mina Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Naanị mgbe asọmpi iko mba ụwa nke 2018 gasịrị, dike mba ọhụrụ mepere isi ọhụụ nke ndụ ya. Bịaru na nnukwu klọb dị ka Barca bụ n'ezie atụmanya kachasị elu maka Yerry. Ọ bụkwa nnukwu uto maka ezinụlọ ya na ndị ikwu ya.
You maara?… 6 ụkwụ 5 powerhouse bụ akụkụ nke Andres IniestaOge ikpeazụ na akụkụ Blaugrana. Onyinye Yerry Mina nyeere Barca aka, oge ahụ, iji nweta aha La Liga na Copa del Rey.
Akụkọ Yerry Mina Barcelona.
Agreekwenyeghị idozi dị ka nhọrọ nke atọ n'azụ Clement Lenglet na Gerard Piqué, Yerry malitere ịgụta ụbọchị Spanish ya na onye dike Spanish. N'iburu aha ya n'uche, ihe ọ chọrọ bụ ka ọ bụrụ ihe mbụ ị ga - eme.
N'ime ndị isi njikwa, Jose Mourinho ghọrọ onye chọrọ itinye aka na ya. Agbanyeghị, ọ bụ nkụda mmụọ nke enwetaghị Mina nke dugara ná ntụkwasị obi ntụkwasị obi n'etiti ndị isi United na onye njikwa, nke butere akpa ya.
Na 11 January 2018, Barcelona kwekọrịtara na Everton maka ịnyefe Yerry Mina. Ina Mina sonyeere Everton n'ihi ịhụnanya ọ hụrụ ndị nnụnnụ ndị iwe. Nke a bụ ewu ewu animated video egwuregwu katuunu.
Ọ bụrụ n’icheta, Nnụnnụ ndị na-ewe iwe nwere mgbe ha na Everton kwadoro aka ha. Obi dị m ụtọ, ndụ ọhụụ na Merseyside hụrụ ka ụlọ ike na-emekọ ihe ọnụ na ndị otu egwuregwu mbụ; amasị nke Lucas Digne na Portuguese Andre Gomes.
Kemgbe ụbọchị ebube 2018 World Cup nke Yerry Mina, anyị maara Columbian a ma ama dị ka onye na-akwụ ụgwọ ya na egwuregwu ahụ. Ee, ndị na-agba bọọlụ Everton nwere ike ịgba akaebe na coloftus ha 6ft 5in nwere obi mgbachitere ha.
N'ezie, isi okwu, ike, na ịkwado akụrụngwa bụ Yerry Mina. Obi abụọ adịghị ya, akụkọ mmeri World Cup nke 2018 ga-ebi n'obi ya ruo mgbe ebighi ebi. Ndị ọzọ, dị ka Lifebogger si kwuo banyere Bio ya, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere Geraldine Molina, Nwunye Yerry Mina:
Emezuru ihe agbachitere ahụ site na nkwado nke nwunye ya. Geraldine Molina eguzowo ya na nwoke site na oke na mkpa.
N'ezie, site na ịlele anya Yerry na ọmarịcha ọmarịcha ya, ị nwere ike ịkọwa na ha dakọtara.
Nwunye Yerry Mina pụtara ụwa dum n'anya ya.
Ọnye na-bụ Geraldine Molina?
Ihe mbu mbu, amuru ya na abali ato nke onwa ise n’aho 3. Nke a n’etu n’afọ karia di ya.
Dabere na ọtụtụ blọọgụ, WAG Columbian na ezinụlọ ya si Guachené, nke bụ otu obodo dị ka di ya.
Yerry Mina amarala Geraldine site na mgbe ha dị afọ iri na ụma. Ha abụọ zutere n'otu oge ọ nweghị ihe ọ bụla na football.
Site n'ịhụnanya na ntụkwasị obi, ha malitere ịhụrịta ibe ha n'anya - kemgbe oge Yerry na Deportivo Pasto.
Ruo afọ niile ya na Geraldine, ọ nọgidere na-achọ ọdịmma onwe ya. Ọ na-aga ebe ọ bụla football na-akpọ di ya.
Everton WAG bụ ụdị onye na-enye di ya nkwado mmụọ, ọbụlagodi na ọ pụtara itinye ndụ ya na njide.
Ọ bụghị naanị n'úkwù ya, ọdịdị ya, ma ọ bụ ịma mma ya, kama ọ bụ obi ọla edo na-eme ka Geraldine Molina maa mma.
Yerry Mina na-etinye foto ya na-amasị ya na ntutu isi ya. N'otu oge, ọ mere vidiyo nke mgbe ọ jụrụ ajụjụ kachasị nye Geraldine Molina.
Lee, ọnọdụ nke oge ahụ a na-agaghị echefu echefu.
Yerry Mina na nwunye ya ka bụ otu n'ime ndị kachasị bụrụ di na nwunye n'etiti ndị ọrụ ibe ya na ndị otu Columbian.
Ka m na-ede Bio ya, di na nwunye ahụ anabatala nwa mbụ ha, nwa nwanyị. Maka onye na-agbachitere nnukwu ụlọ, Geraldine na Marianela (nne ya) bụ ndị kacha nso obi ya.
Zute mmadụ abụọ kachasị mkpa na ndụ ya.
Ndụ nke Yerry Mina:
N’agbanyeghi ogo ya di egwu, na nde mmadu ndi na abanye n’ime akuko ya, the Big man bu onye kacha di umeala n’obi i ghaghi izute.
Ewezuga football, Yerry Mina na-ebi ndụ dị nwayọ na-enye ume ọhụrụ n'ụlọ obibi England ya na onye mmekọ ya, Geraldine.
Banyere àgwà ya, Columbian na-enweta ịhụnanya nke ndị mmadụ, ọkachasị ụmụaka, ebe ọ bụla ọ na-aga. N'ime ụmụaka, ụmụaka Everton (ọkachasị) na-enwe ọ havingụ na Yerry na-eme ha obi ụtọ site n'ịgba egwu ya.
Nke a bụ otu n'ime oge dị egwu nke ịgba egwu ya, vidiyo ebe Prọfesọ Mina na onye otu onye Brazil na enyi ya, Richarlison, gosipụtara ịdị umeala n'obi ha.
Ndụ Yerry Mina:
N'ihi egwuregwu ya, Columbian agbaghaala akụkụ nke ya maka nnwere onwe ego. N'agbanyeghị ụgwọ ọnwa ya buru ibu, Mina nwere ọgụgụ isi.
Ọ dịghị egosi akụ na ụba ya Fans. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, onye na-agbachitere ya nọgidere bụrụ ihe na-egbochi ụzọ ndụ dị egwu.
Jerry Mina arsgbọ ala:
Agbanyeghị, o nwere ha ọtụtụ. Mana Mina choro idobe ugbo ala ya na ihe ndi ozo. Naanị ya na-eme ka ọha na eze mara, nkwado ya na ụlọ ọrụ ndị na-arụpụta ụgbọ ala.
Dị ka ihe akaebe, lee Columbian nke nwere ụgbọ ala abụọ; BMW na Fiat Argo - naanị maka ebumnuche azụmaahịa na azụmaahịa.
Rygbọ ala Yerry Mina enweghị ike ịdị anya site na ụdị ndị a.
Ndụ Yerry Mina Ezinụlọ:
Maka ndị obodo Guachené, ịhụnanya maka ezinụlọ ya bụ otu n'ime ngọzi ya kachasị mma. Nke a bụ otu ihe akaebe nke vidiyo.
N'ezie, enweghị ego bọọlụ nwere ike iwepụta oge Yerry na ezinụlọ nuklia ya nọ. N’akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị mụrụ ya, nwanne ya, na ndị ikwu ya.
Nke a bụ ndị ezinụlọ ezinụlọ Yerry Mina. Nwere ike ịhụ ebe yiri ebe ọ bụla?
Banyere Nna Yerry Mina:
José Eulises Mina nwere ọkpara ya mgbe ọ dị obere (mmalite 20s).
Ghọ nne ma ọ bụ nna mgbe ọ dị obere nyefere ọrụ dị ukwuu n’ubu ụmụaka ya. Maka nke a na ndị ọzọ, ezinụlọ José Eulises gbara mgba.
Nna Yerry Mina nwere obere ohere dị ka onye na-eche nche. N'ihi nke a, ọ manyere ya ịhapụ nrọ football ya. Obi dị m ụtọ na ihe mechara siere ezinụlọ ya ike ịghọrọ ngọzi.
Yerry Mina enweela ezigbo mmekọrịta na papa ya kemgbe ọ bụ nwata.
Nna mpako nwere obi umeala dika nwa ya nwoke. José Eulises na-ejikwa ọtụtụ azụmaahịa nwa ya nwoke, gụnyere Yerry Mina Foundation na obodo ya Guachené.
Ezinụlọ ya mere akụkọ ihe mere eme site na Barcelona ikuziri onye mbụ Columbian (nwa ya nwoke).
Banyere mama Yerry Mina:
Ndị na-agba ọsọ ụkwụ nwere mmekọrịta chiri anya na nwanyị mbụ nke ndụ ya.
Kemgbe amụrụ ya, nne nne Marianela maka Yerry bụ nke kachasị ike, nke metụta mmepe nwa ya nke ọma.
Ihe kachasị Marianela nwere bụ nwa ya nwoke mbụ. Ma Yerry na mama ya nwere ezigbo njikọ kemgbe ọ bụ nwata.
Mmetụta nke mmezu nke nne bụ ihe mbụ ga - eme gị mgbe ị zutere Marianela González. Yerry achụrụ onwe ya àjà ugboro ugboro ka o wee nwee ike itinye naanị ihu ya.
Mina kwere nkwa site na nwata na ya ga-eme Marianela, mama ya, ịmụmụ ọnụ ọchị.
N'achọghị iwuru ya ụlọ, Yerry rụzuru ọrụ ya nke ime ya akụkụ nke mmefu ego nke aka ya.
N'oge ahụ, ọ na-enye mama ya (maka ezinụlọ) - 4,000 nke ụgwọ ọrụ 6,000 ya ma jiri ndị ọzọ zụta nri mgbe ọzụzụ gasịrị.
Marianela na-adọta ike ya site na nwa ya nwoke - ihe na-eme ka ọ dịkwuo jụụ n'oge a. Ọbụna ọ dị obere ma mara mma ka afọ na-aga.
Nke a bụ ihe inwe ụdị ịgba ọsọ na-aga nke ọma dị ka nwa nwoke nwere ike ịkpata. Marianela na-ekpori ndụ kacha mma.
Banyere Nwanna Yerry Mina:
Juan José bụ aha. Ọzọkwa, Yerry bụ arụsị kasịnụ ya. Ugbu a toro, Juan na-ebikwa ndụ ịgba bọl.
N'oge ịmepụta Yerry Mina's Bio, nwanne ya nwoke nke tọrọ dị ka onye na-aga n'ihu na onye na-ebu ụzọ maka ndị otu Colombia n'okpuru 15.
Mgbe ọ dị afọ 14, ọtụtụ maara Juan José iji gosipụta otu àgwà ahụ nwanne ya nwoke. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - enweta ụdị edozi dị ka Yerry, na-aga ije dị ka Yerry, na-ekwu okwu dị ka Yerry, na ọbụna na-agba egwu Yerry's Mina's mgbaru ọsọ mmemme.
Banyere 2021, Juan José nwere atụmatụ maka ntorobịa Deportivo Cali.
Maka Juan José, inwe nnukwu nwanne nwere ihe ịga nke ọma na-eweta mpako kachasị ukwuu.
Banyere ndị ikwu Yerry Mina:
Anyị na-amalite site na Deede ya aha ya bụ Jair Mina. Ewezuga nwoke a, Yerry agaraghị amalite ọrụ ya nke ọma. Nwanne nna ya bụ ezigbo onye ikwu, nwoke na-ahụ maka ịkpọrọ ya maka ikpe mbụ ya na Deportivo Pasto.
Yerry Mina na nwanne nna ya, Jair Mina sere foto.
Onye nche bọọlụ nke mbụ dịkwa ezigbo nso na papa Yerry. Dịka m na-ede, ọ na-eje ozi dị ka onye nnọchi anya Mina. Jair Mina bụ ụbụrụ dị n'azụ mkparịta ụka mara mma - nke rụpụtara Mina ụgwọ ọrụ ya.
Yerry Mina Eziokwu Eziokwu:
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ụfọdụ eziokwu gbasara 6 ụkwụ 5 colossus. Enweghị oge ọzọ, hapụ ka ịmalite.
Eziokwu # 1 - nkwụsị ụgwọ ọnwa Everton:
Ego a na-akwụ EVERTON IN Pound (£)
Kwa Afọ: £ 6,336,000
Ọnwa kwa: £ 528,000
Kwa Izu: £ 120,000
Kwa ụbọchị: £ 17,143
Oge Awa ọ bụla: £ 714
Nkeji ọ bụla: £ 12
Sekọnd ọ bụla: £ 0.19
Kemgbe ị malitere ile Yerry Mina'Bio, nke a bụ ihe ya na Everton rụworo.
You maara? Average onye ọ bụla nọ na England na-akpata 30,000 pound kwa afọ ga-achọ afọ 4 iji mee Yerry Mina ụgwọ ọnwa kwa izu na Everton.
Jerry Mina Net thtọ:
Kemgbe 2013, mgbe ọ malitere ọrụ ịgba bọl, Yerry enweela nnukwu ego n'okpuru Jair na ụlọ ọrụ Wasserman. Site na ịkwụ ụgwọ 2021 nke £ 6.3m, gụnyere nkwado nkwado, anyị na-ele Yerry Mina's 2021 net uru na m 20m.
Eziokwu # 2 - Oge mgbatị Yerry Mina:
Anụ 6 ụkwụ 5 na-eme ahụ nke na-edozi ahụ ya kwa ụbọchị n'izu. Yerry na-eme ọbụna ụbọchị ọ na-enweghị ọzụzụ. Nke a bụ vidiyo mgbatị ya.
Eziokwu # 3 - Okpukpe Yerry Mina:
Dị ka Ricardo Kaka, nwaafọ Guachené bụ Onye Kraịst ji okpukpe kpọrọ ihe. Yerry bụ onye nọ n'ọrụ nke CGMJCI neo-Pentikọstal.
Nkọwa okwu a na-anọchi anya Church of God Ministry of Jesus Christ International. Dịka okpukperechi ya tụrụ anya ya, Mina gosipụtara nrara ọ raara onwe ya nye Kraịst, ọbụnadị na pitch.
Anyị na-akọwa Okpukpe Yerry Mina na foto a.
Urcheska na-akpọkarị onye nnukwu agbachitere dị ka onye ọbịa ọbịa na mmemme ha. N’ebe ahụ Mina na-ekwu maka ndụ ya, okwukwe ya, na ntinye onwe ya nye Chineke.
Eziokwu # 4 - Ihe ngosi ngosi nke Barcelona:
Yerry bụ nwoke ọdịnala. Dị ka ọdịnala na-atụ anya ya, ọ na-etinye aka na nkwenkwe na omume ochie nke ezinụlọ ya.
N'oge ọ na-egosi Barcelona, ​​kpakpando World Cup gbasoro ụkpụrụ ọdịnala nke mmalite ya.
Ee, ịbụ mbụ Columbian ikuziri Barcelona bụ nnukwu nsọpụrụ. N'ịchọ ya ịchọ Ọchichọ na Europe, Mina ghapụrụ sọks na akpụkpọ ụkwụ ya tupu ya abanye na Camp Nou. N'okpuru ebe a bụ vidiyo.
Ọtụtụ ndị na-agba ọsọ Columbian na-eme omume ọdịnala a. Ọmụmaatụ, na-amasị nke Alfredo Morelos na Duvan Zapata, Wdg
Eziokwu # 5 - Egwuregwu Egwuregwu Na-adịghị Mma:
Nkọwa Yerry Mina (FIFA) dịka nke 2021 anaghị agakọ na ihe ọ na-enye na pitch.
Onu ogugu nke 79 na 81 nwere ike di ka ihe ezighi ezi nye nwoke anakpo dika onye agbachitere kachasi elu na egwuregwu World Cup. Echefula, ya na Everton nwere ezigbo 2020.
Rydị umeala n'obi Yerry Mina dị obere, ma na ndụ onwe ya na ọrụ ya. Ọ bụ onye nwere mmasị na ndị Fans. Kemgbe nwatakịrị, Mina na-arụsi ọrụ ike oge niile - site na ezinụlọ, okpukpe, agụmakwụkwọ, na ọrụ.
Ọ dị mkpa ka Lifebogger nwee ekele maka nne na nna ya (Marianela González na José Eulises Mina) maka ịkụnye n'ime ya, ụkpụrụ omume ọma nke mere ka Yerry dị ukwuu. Dika ozo, nwanne nna ya (Jair Mina) nyere aka wulite ntọala football ya.
Ihe omuma nke Yerry Mina na-akuziri anyi otu ihe. Na ọ bụrụ na a mụrụ gị n’ezinụlọ dara ogbenye, ọ bụghị gị kpatara ya.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị jụ ịnọgidesi ike na-arụsi ọrụ ike, yabụ na-ada ogbenye, mgbe ahụ ụta dịịrị gị. Ihe ndekọ nke Yerry Mina na Everton bụ ihe akaebe nke agbanwe agbanwe.
Daalụ maka ịnọnyere anyị na akụkọ ndụ nke otu n'ime ihe ndị kachasị ọnụ ahịa Los Cafeteros. Na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ n'ọrụ anyị na-ebuga akụkọ egwuregwu bọọlụ Columbian.
Jiri obiọma kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị mma na Bio anyị na Mina. Ọzọkwa, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị mee ka anyị mara ihe ị chere banyere onye na-agbachitere ya na ngalaba nkọwa. N'ikpeazụ, maka nchịkọta ngwa ngwa nke ihe ncheta Yerry, jiri tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Yerry Fernando Mina González.
Age: 27 afọ na ọnwa 0.
Ụbọchị ọmụmụ: Rdbọchị 23 nke Septemba 1994
Ebe amụrụ onye: Guachené, Colombia
Ndị nne na nna: Marianela González (Nne) na José Eulises Mina (Nna).
Nwanna: Juan José
Nwanna nwanyị: Ọ dịghị onye
Nwunye: Geraldine Molina
Nwa: Nwa nwanyị (dika nke 2020)
Mmekọrịta: Jair Mina (Deede)
Rygwọ ọnwa gị na Everton: 6,336,000 nde pound.
Ezigbo Net: 20 Nde Pound (2020 stats)
Ihe akara Zodiac: Libra
elu: 195 sentimita ma ọ bụ 1.95 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 5 sentimita asatọ.
Egwuregwu Ọnọdụ: Ndabere na azu.